Freedom ဆော့၀ဲလ်လေး အလုပ်လုပ်သေးလား - MYSTERY ZILLION
Freedom ဆော့၀ဲလ်လေး အလုပ်လုပ်သေးလား
ဒီနေ့ freedom သုံးကြည့်တာ . . .server လည်း ချိတ်မိတယ်(တံခါးပွင့်သွားတယ်). . .proxy ချိန်းပီးတော့ website ဖွင့်ကြည်တယ် . . . weg page မတက်ဘဲနဲ့. . .ဘယ်လိပ်စာ၀င်၀င်. . Done ဖြစ်ပီးတော့ အဖြူပြင်ပဲပြတယ်. . . ဆော်ဒီနဲ့သုံးနေတာကြာတော့ freedom မသုံးဖြစ်ဘူး . . .အခု pfingo ၀င်မရလို့ ကျော်ကြည့်မလားစမ်းကြည့်တာ . . .အဲ့ဂလိုဖြစ်နေတယ်. . .:39: freedom သုံးတဲ့သူများရှိရင် . .အကျိုးအကြောင်းလေးပြောပြကြပါအုန်း:2:
Ports ဆိုတဲ. tab အောက်ကိုပြန်စစ်ပေးပါခင်ဗျာ။
SOCKS 4/5 port 1080 နဲ.
web proxy port 8080 ရယ်ကို အမှန်ခြစ်ပေးထားဖို.လိုပါတယ်။
freedom server ကို change ကြည့်ပါလား၊ အခု ၂ရက် ၃ရက်ထဲမှာ ems01.your-freedom.de က အလုပ်မလုပ်ဘူးဗျ
အဲဒါနဲ့လည်းဆိုင်တော့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်.....တစ်ခါတစ်လေကြရင်..အဲဒိလိုကြောင်တတ်တယ်ခင်ဗျာ...... အကောင်းဆုံးကတော့ freedom server ကို change ကြည့်လိုက်ပါ